Diyaaradaha Waraaqaha - Ikkaro
Qaybta laga hadlayo warqad Diyaarado. Dhismaha, foomamka duulimaadka, xiriiriyeyaasha, qorshooyinka, iwm.
Tan iyo markii aan yaraynay waxay soo jiitaan indhaheenna. waxaan qaadannaa warqad waxaan ku laabaneynaa gacmaheena si lama filaan ah taasi waxay noqotay diyaarad iyo waliba DUULA! Ma jiraan wax macquul ah oo wax ku ool ah oo asalka u ah asalka si loo jajabiyo cunug.
Waxaan kubilaabnay qaababkii caadiga ahaa, kuwa aan wada garaneyno sida loo sameeyo dhawaana aan ubaahan nahay waxbadan, waxaanan bilawnay raadinta noocyo kala duwan oo ah diyaaradaha waraaqaha, kuwaas oo ah kuwa ugu duulista badan, kuwa ay ku degdegaan sameynta, iwm. , iwm
Qeybtaan waxaan uga hadli doonaa dhamaan diyaaradan, midkee ka duuleysa midka ugu fiican, ilaa duulista ugu fiican. sida loo sameeyo diyaarado talaabo talaabo ah iyo su aalo kale oo xiiso leh oo laxiriira aduunka Origami iyo abuurida moodal diyaaradeed oo waraaqo ah. Ma ogtahay inay jiraan jilayaal diyaaradeed? Ka waran tartamada waqtiga duulimaadka? Maxay yihiin mashiinno kaligood sameeya diyaaradaha oo bilaabaya? Miyaad jeceshahay inaad dhisto diyaarad waraaqo kuu gaar ah?
Hagaag, taasi waa waxa aan sameynayo. Wixii fikrad ah ee aad hayso marwalba waa lasoo dhaweynayaa.
Waxaan idinkaga tegayaa casharrada ku saabsan sida loo sameeyo Diyaaradaha Diyaaradaha. Hadana hadaad tahay origami lover fiiri qaybteenna
Diiwaanka adduunka oo leh diyaarado warqad ah
Waxaan uga tagnay laba fiidyow rikoodhada adduunka oo wata diyaarado waraaqo ah sanadkan.
Dhinac waxaan leenahay duulimaadkii ugu dheeraa, oo leh 27,9 ilbidhiqsi.
Iyo dhanka kale, tartan xiise leh oo aanan waligey arag. Duulimaadkii diyaaradda diiwaanka adduunka ee duulimaadkeedu ahaa kuub. Xaqiiqdii xiisaha, ma aqaan masaafada ay tahay inaad u dhigto kuub haddii aad rabto inaad ku tababarto oo aad isbarato, laakiin waan baari doonaa.
Runtii xiiso badan ayaan u leeyahay cube, waa inaan tan isku dayaa, hehehe
Waxaas oo dhan waan ku aragnay Oriplane
DC-03 waa warqadda ugu fiican ee adduunka lagu luuqo
Waxaan soo bandhigeynaa Diyaarad Paper DC-03 tixgelin diyaaradda waraaqda ugu fiican adduunka.
Laakiin dabcan, sida ugu fiican, ugu xun ama wanaagsan waa qaraabo, waxay kuxirantahay ujeedada aan higsaneyno, waxaan jeclahay inaan iraahdo waa warqadaha ugu fiican adduunka. Hagaag, arimahan waxay umuuqdaan inaysan lahayn cid la tartanta.